Xaqiiqooyinka Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Man United Garaacday Man City. – Kooxda.com
HomePremier LeagueXaqiiqooyinka Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Man United Garaacday Man City.
March 7, 2021 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta 0
Kooxda Man United ayaa garaacday kooxda Man City kulan ka Dhacay Etihad kana tirsanaa horyaalka premier League todobaadkii 27-aad ee xilli ciyaareedka.
Goolal ay dhaliyeen xiddigaha Bruno Fernandes iyo Luke Shaw ayaa Man United ka caawiyay in ay gaadho guul ay u qalantay waliba muhiim u ahaa kooxda Ole Gunnar Solskjaer.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa xaqiiqooyinka laga diwaan galiyay kulankii ay United garaacday Man City.
1.Rikoodhadii uu Bruno Fernandes dhaliya ayaa ah rikoodhadkii 92-aad ee laga dhigo horyaalka premier League xilli ciyaareedkan waxana uu bar-abreeyay rikoodhayaashii laga dhigay xilli ciyaareedkii hore.
2.Man City ayaa hal gool iyo wax ka badan looga dhaliyay garoonkeeda Premier Legaue markii ugu horaysay tan ilaa bishii September 2020 markaas oo ay Liecester City 5/2 kaga badisay.
3.marka la eego 67-kii tababare ee uu Pep Guardiola ka hor tagay 3 kulan iyo wax ka badan tartamada oo dhan tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa ah tababaraha kaliya ee 3 jeer garaacday tababare Guardiola.
4.Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa noqday tababarihii ugu horeeyay ee taariikhda Man United ee garaaca Man City 3-diisii kulan ee ugu horeeyay ee kulamada martida tartamada oo dhan.
5.Man City ayaa la kulantay guuldaro markii ugu horaysay tan ilaa November 2020 markaas oo ay guuldaro 2/0 ah kala kulantay Man City waxana ay Man United soo afjartay 28 kulan oo guuldaro la’aan ah oo tartamada oo dhan ah.
6.Maanta ayaa ah markii ugu horaysya ee Garoonkooda lagu garaacay Kooxaha Liverpool iyo Man City tan ilaa March 2007 markaas oo ay Man City iyo Liverpool guuldarooyin kala kulmeen Man United iyo Wingan.